चुरे दोहनले रित्तिँदै पानीको भण्डार
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ जेष्ठ १९, बुधबार ०७:५४
फागुन दोस्रो साता जनकपुरधामको जानकी मन्दिर प्रांगणमा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भनेका थिए, ‘चुरेको विनाशलीला हेर्दा आँखा रसाउँछ । चुरे विनासका कारण जनकपुरमा अहिले ४ सय फिटमुनि पनि पानी भेटिन्न ।’
डा. यादवले सुनाएको दुःख जनकपुरको मात्र नभई सम्पूर्ण मधेसको हो । यस क्षेत्रका अधिकांश जिल्लाका गाउँबस्ती काकाकुल बनेका छन् । इनारहरू सुक्न थालेका छन् । गहिरो गरी गाडिएका चापाकल (ट्युबवेल) बाटसमेत पानी आउन छाडेको छ । खानेपानी संकटले मधेसका गाउँबस्ती पिरोलिएका छन् ।
पानीको मूल सुक्दै जान थालेकाले धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ नवटोली बस्तीलाई खानेपानी समस्याले चर्को रूपमा गाँजेको छ । चारनाथ खोला र कमला नदी उत्तरवर्ती चुरे पहाडमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनका कारण यस भेगका जनता काकाकुल बन्दै गएको नवटोली निवासी कमल महतोले बताए । ‘कलको ह्यान्डल घन्टौं थिच्दा पनि बाल्टिन भरिँदैन,’ उनले सुनाए । महतोको घरसामुन्ने खानेपानी कार्यालयले बनाइदिएको इनार छ, तर दुई वर्ष भयो पानी पलाउन छाडेको छ ।
सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–२ बन्दीपुरका जनता पनि खानेपानीको चरम अभाव खेप्न बाध्य छन् । ‘दुई वर्षअघिसम्म जसोतसो चापाकलले पानी फालेको थियो,’ स्थानीय गीता जोशी भन्छिन्, ‘पोहोरबाट त चुहिनै छाड्यो ।’ यतिखेर गीताको परिवारलाई राजमार्गभन्दा दक्षिणतिर घर भएकी सुनिता भट्टराईकहाँबाट पानी ल्याएर प्यास मेटाउनुको विकल्प छैन ।
सिरहा गोलबजार नगरपालिकाका जनता पनि काकाकुल बन्न पुगेका छन् । चुरेनजिकैको यो नगरपालिकाका अधिकांश वडाका बासिन्दा पानीको चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य छन् । पानीको मुहान तलतल गएपछि नगरवासीलाई खानेपानीको समस्या झन्झन् चुलिँदै गएको स्थानीय रामस्वरूप महतो बताउँछन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा झापामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमण
मलेसियाबाट एकैदिन ल्याइयो ६ जनाको शव र १५ जनाको अस्तु
चन्द्र प्रसाईको गीत ‘परिष्कृत’मा प्रेम र पिडा
असोज ४ गते पछि मात्रै सरकार विस्तार हुन्छ : प्रचण्ड
चिनियाँ अन्तरिक्षयात्री ९० दिनपछि सकुशल फिर्ता
पूर्वी चितवनमा ५९ वर्षीय लामाको हत्या, छिमेकी पक्राउ
काठमाडौँमा जुवाखालबाट लाखौँ नगदसहित २० जना पक्राउ
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीबाट तामाङ र बोहरा बने मन्त्री
ग्यास चुहिँदा जगदम्बा स्टिलमा तोडफोड भएको छानबिन समितिको…